घिमिरे होम्सको पावरफूल कथा | Nepalese Diaspora
बाल्टिमोर / अमेरिका
क्रिस घिमिरे र हेलेन घिमिरे मेरिल्याण्डको रियल स्टेट ब्यापारमा चर्चित नाम हो । उनीहरुको ब्यबसाय ‘घिमिरे होम्स’ एउटा प्रतिष्ठित ब्रान्ड नै बनिसकेको छ । सन् २०२० को फेब्रुअरीमा यो जोडी मेरिल्याण्ड राज्यको ‘बाल्टिमोर रियल प्रोड्युसर’ म्यागेजिनका लागि ‘पावर कपल्स’ विशेषांकमा फिचर्ड भएपछि घिमिरे होम्स र घिमिरे दम्पतिको ब्यबसायिक जीवनको चर्चा अझै फराकिलो भएको छ ।
‘पावर कपल्स’ विशेषांकमा फिचर्ड भएको फोटो सार्बजनिक भएदेखि नै क्रिस र हेलेनलाइ बिभिन्न माध्यमबाट बधाई र शुभकामनाका संदेशहरु प्राप्त भईरहेका छन् । “हामीहरु सबैप्रति धन्यवाद र आभार ब्यक्त गर्दछौं ।” क्रिसले नेप्लिज डायस्पोरासंगको भेटमा भने ।
नेप्लिज डायस्पोराले ‘पावर कपल्स’ घिमिरे जोडी भेट्न जाँदा कार्यालयमा क्रिस मात्र भेटिए । “आफ्नै ब्यबसाय गरेका हौँ तैपनि हामीलाई राम्रो काम गरेको भनेर ‘रिकग्नाईज्ड’ गरियो । यो व्यवसायमा लागेर केहि राम्रो गरेछौं की ! भन्ने हामी दुवैलाई लागेको छ ।” क्रिसले भने ।
मेरिल्याण्डमा झन्डै ४० हजार रियल स्टेट एजेन्ट रहेको क्रिसको आंकलन छ । यिनै रियल स्टेट एजेन्टहरुको प्रचार प्रसार र प्रबर्दनमा ‘बाल्टिमोर रियल प्रोड्युसर’ म्यागेजिनले सहयोग गर्दछ । हरेक महिना बिशेष ‘थिम’ सहितको म्यागेजिन प्रकाशन गर्दछ । २०२० को फेब्रुअरी महिनाको लागी म्यागेजिनको मुख्य बिषयबस्तु ‘पावर कपल’ छ । अर्थात्, रियल स्टेट व्यवसायमा लागेका श्रीमान श्रीमतीको संघर्ष र सफलताका कथा-व्यथा र नालीबेली । घिमिरे होम्सको ब्यबसायिक सफलतामा हेलेन र क्रिसको ‘क्यामेष्ट्री’को चर्चा त्यहाँ गरिएको छ ।
५० दम्पतिको नोमिनेशन परेको थियो । जसमध्ये यो म्यागेजिनमा ७ दम्पतिको मात्र चर्चा गरिएको छ । ‘रियल प्रोड्युसर’ले नोमिनेशन आव्हान गरेपछि ‘रियल प्रोड्युसर’ कै ग्राहक मध्येबाट आफ्ना फेलो सदस्यहरुको नोमिनेशन गरिदिनुपर्छ। अनि मात्र उनीहरुको माथि सोधखोज शुरु हुन्छ र योग्य भएपछी म्यागेजिनमा छापिन पाईन्छ । यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर घिमिरे होम्सको यो जोडी ‘रियल प्रोड्युसर’मा छापिन पुग्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस : गोली लागेर अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा एक नेपाली महिलाको निधन अर्का एक नेपाली घाईते
“यो व्यवसायमा जोडी भएर काम गर्दैमा पनि होइन, उनीहरुले हाम्रो नम्बर पनि हेरे । हामीले कति घर खरिदबिक्रि गर्यौं भन्ने कुराले पनि महत्व राख्यो ।” क्रिसले नेप्लिज डायस्पोरासंग भने ।
घिमिरे होम्स मेरिल्याण्डको रियल स्टेट कारोबार गर्ने टप १०० रियल्टर भित्र पर्छ । साथै यो मेरिल्याण्डको टप ५ प्रतिशत रियल स्टेट एजेन्ट अन्तर्गत पर्न सफल भएको छ ।
यो जोडीको भेट १९९९ मा कलेजमा भएको थियो र परिचय चुनावी मैदानमा । दुबैजना बिदेशी बिद्यार्थी थिए । हेलेन फिलिपिन्सबाट आएकी र क्रिस नेपालबाट । कलेजमा पढ्दा इन्टरनेशनल क्लबको चुनाव भयो । उपाध्यक्ष पदमा तीनजना उठेका थिए, यी दुबैजनाले हार्ने पक्का भयो । हेलेनले क्रिसलाई चुनावमा नउठ्न आग्रह गरिन तर क्रिसले मानेनन । अन्तत: दुवैजनाले हारे र तेस्रो साथीले जित्यो । त्यसपछि उनीहरु नजिक भए । चुनावमा छुट्टै उठेका हेलेन र क्रिस चुनाव हारेपछि मात्र एक भए ।
हारले जुटाएको यो जोडीलाई जीवनले भने जित नै जित दिएको छ । एकपछि अर्को सफलता हातमा परेको छ ।
भईरहेको राम्रै जागिर छोडेर सन् २००५ देखि यो जोडीले शुरुका दिनमा ‘घर जग्गाको लोन’ सम्बन्धित ब्यबसाय गर्दथ्यो। २००८ देखि उनीहरुले घर जग्गा खरिद बिक्रिको काम शुरु गरे । त्यसपछि जमेको यो जोडीले कहिल्यै पछाडी फर्केर हेर्नुपरेको छैन ।
मेरिल्याण्डमा घिमिरे होम्सले हजारौं ग्राहकलाई घर बिक्रि गरेर सेवा, सहयोग र व्यापार एकसाथ गरेको छ । “ग्राहकहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हामीलाई राम्रा प्रतिक्रिया आईरहेका छन।”क्रिस घिमिरेले भने ।
क्रिस घिमिरे बानाका पुर्ब अध्यक्ष हुन् भने बाल्टिमोरमा बन्दै गरेको हिन्दुबुद्ध मन्दिरका एक अगुवा र प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुन् । बाल्टिमोर वरपरको हरेक सामाजिक कार्यमा उनीहरुको केहि न केहि संलग्नता देख्न पाईन्छ । नेपाली समुदायलाई सहयोग गर्न यो जोडी व्यवसायमा जस्तै सधै अग्रसर छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस : अझै खुलेन डिभी लोटरी, ठगबाट बच्न सुझाव
तिन छोराका मातापिता हेलेन र क्रिसले एउटा रमाइलो र सुखी जीवन बिताएका छन् । हेलेन र क्रिसको ब्यबसायिक जीवनको आयाम अझै फराकिलो होस् ! शुभकामना ।
यो बर्षको लागि तपाईको भ्यालेन्टाईन गीत
साथी बाल्टिमोरले ब्यक्ति, बिद्यार्थी र ब्यापारीलाई सहयोग गर्दै
अमेरिकाका नेपालीको चिन्ता गर्दै एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सुनील साह
अमेरिकाले आफ्ना नागरिक बिमान चार्टर गरेर अमेरिका ल्याउदै, कलाकार सरोज खनालसमेत
साथी बाल्टिमोरले नेपाली समुदायका हेल्थ वर्करलाई मास्क वितरण गर्ने
साथी बाल्टिमोरले मेरिल्याण्डमा दोस्रो दिन आज पनि मास्क बाढ्दै
‘विश्व सञ्जाल' को गठन अचानक थिएन -सुभाष घिमिरे
अनेसासको अध्यक्षमा राधेश्याम लेकाली र महासचिवमा घिमिरे विजयी
प्रदिप घिमिरे म्युजिक भिडियो "आमा" सार्बजनिक
चितवन समाज अमेरिका (डीसी मेट्रो क्षेत्र) को अधिबेशन…
'सय वर्ष लाग्नु भन्या पनि एउटा रमाइलै त हो नि !' -…
एउटा अर्को दशैँ -सुभाष घिमिरे
गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेशनको अमेरिका संयोजकमा…
यसपटक मैले पनि एक जिम्मेवार पदमा रहि सेवा गर्नै सोच…
हाम्रो विजय यात्रा शुरु भयो -डोलनाथ घिमिरे
"मलाई मत दिनुस, मैले कामबाट जवाफ दिनेछु"-बाला…
समुदायलाई एक गरेर समुदाय केन्द्रित काम गर्नेछु…
अमेरिकामा अहिले घरभाडा तिर्ने कि नतिर्ने -सानुबाबु सिलवाल​ 1,081 views
अमेरिकाको न्युयोर्कमा ४ नेपालीको निधन 989 views
कोरोना र मिसाइल (कविता) -सुनिल पौडेल 280 views
साथी बाल्टिमोरले नेपाली समुदायका हेल्थ वर्करलाई मास्क वितरण गर्ने 112 views
भ्रमित छ संसार नै भक्तहरूका नजरभरि -प्रथा(५ मुक्तकहरू) 88 views
अमेरिकाका नेपालीको चिन्ता गर्दै एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सुनील साह 84 views